Halkee Buu Marayaa Khilaafka Kheyrre Iyo Suufiyada Dhuusomarreeb?. – Shabakadda Amiirnuur
Halkee Buu Marayaa Khilaafka Kheyrre Iyo Suufiyada Dhuusomarreeb?.
July 29, 2019 7:18 am by admin Views: 58
Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxay sheegayaan in ay halkaa ka socdaan kulamo xasaasi ah oo looga hadlayo khilaafka soo kala dhex galay ra’iisulwasaaraha DF iyo madaxda kooxda Suufiyada.
Khilaafka ayaa ka dhashay kala shaki dhanka ammaanka ah, waayo ra’iisulwasaaraha ayaa wuxuu doonayaa in xarumaha lagu shirayo ay ilaaliyaan ciidamo uu isagu ku kalsoon yahay islamarkaana uu Xamar ka keensaday, sida muuqatana wuxuu ka shakisan yahay in suufiyadu sugi karaan ammaanka.
Dhanka kale hogaamiyaasha Suufiya ayaa kasoo hor jeestay go’aanka ra’iisulwasaaraha iyagoo sheegay iney bah dilaad u arkaan in ciidamadooda magaalada hareeraheeda la geeyo xarumaha muhimka ahna lagu wareejiyo kuwa uu Ra’iisulwasaaruhu wato.
Kheyrre ayaa aad uga carooday tallaabadii ay shalay suufiyadu qaadeen taasoo ahayd in muddo laba goor ah ay hawada ka celiyeen ciidamo xamar laga soo diray oo BS u badan.
Hogaamiyaha Suufiya Macallin Maxamuud iyo kan galmudug u matala ee Axmad Shaakir ayaa ku adkeysanaya in aan magaalada Dhuusomarreeb la keenin ciidamo dheeraad ah iyagoo sheegay in kuwooda ay ku filan yihiin.
Sida ay sheegayaan ilo wareedyo ku sugan Dhuusomarreeb, waxaa soconaya kulamo u dhaxeeya xildhibaano iyo siyaasiyiin doonaya iney dhaxdhaxaadiyaan labada geesood.
Tan iyo xalay ayay kulamadu socdeen illaa iyo haddana ma jiraan wax yaabo la isku waafaqay ama la isla gartay. Haddii ra’iisulwasaaraha dalabkiisa la aqbali waayo waxay u badan tahay inuu magaalo kale aado sida Cadaado, waayo wixii ka dambeeyay hawl galkii xarunta Dowladda hoose ee Xamar waxaa jirta baqdin dhanka ammaanka ah oo ay qabaan madaxda DF.
Arrintan waxay dib u dhac ku keeni kartaa shir loo madalsanaa inuu qabsoomo 5-bisha August oo ku began Isniinta soo socota.
Isku soo wada duuboo khilaafkan ka jira DF iyo Suufiyada Dhuusomarreeb ayaa ka marqaati kacaya in DF ay magac ahaan uun u jirto balse aaney jirin meel ay ka taliso oo dhaafsiisan qaar kamid ah xaafadaha magaalada Muqdisho, marba haddii ra’iisulwasaaraha loo diidayo ciidamadii isaga ilaalin lahaa.
Dhowr jeer oo hore waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo laga soo cayriyay wafdi wasiirro ah oo ka socday DF.
Dhawaan waxaa ra’iisulwasaaraha loo diiday inuu booqdo xarumaha maamulka Puntland ee wuqooyiga Gaalkacyo iyadoo dambi looga dhigay inuu magaalada ku tagay amar la’aan.